Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण गठबन्धनको विपक्षमा ठाकुर–महतोको दौडधुप: राष्ट्रपति कार्यायलाई चिठी
गठबन्धनको विपक्षमा ठाकुर–महतोको दौडधुप: राष्ट्रपति कार्यायलाई चिठी
३० बैशाख २०७८, बिहीबार ०८:२९
काठमाडौँ, ३० वैशाख । केपी शर्मा ओली सरकारविरोधी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बुधबार दिनभर दौडधुपमै व्यस्त भए । ठाकुर र महतोले नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरू तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन् ।
ठाकुरनिकट नेता डा. सुरेन्द्र झाका अनुसार बुधबार दिउँसो ठाकुर र महतोले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास गई राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए । ‘जसपामा दुईवटा पार्टी अध्यक्षको व्यवस्था छ । पहिलो अध्यक्षलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रो अध्यक्षले गरेको हस्ताक्षरले पार्टीको प्रतिनिधित्व नगर्ने जानकारी उहाँहरू (ठाकुर र महतो)ले राष्ट्रपतिलाई गराउनुभएको छ,’ झाले भने । उपेन्द्र यादवले गरेको हस्ताक्षरले पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँने भन्दै ठाकुर–महतो पक्षले यसअघि नै राष्ट्रपति कार्यायलाई चिठी लेखेर जानकारी गराएका थिए । निर्वाचन आयोगमा पठाइएको सूचीमा जसपामा दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार एउटा अध्यक्षले मात्र गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आयोगमा खुलाइएको छैन ।
ठाकुर र महतो पक्षधार नेताहरूले बुधबार साँझ पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा अनौपचारिक बैठक गरेका थिए। उक्त बैठकमा कित्ता परिवर्तन गरेका महेन्द्र यादवबाहेक पूर्व राजपाका सबै शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । यता उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले पनि पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक गरेका थिए । ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रका अनुसार बुधबार दिउँसो केहीबेर पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र ठाकुरबीच कुराकानी भएको थियो ।
ठाकुरनिकट डा। झाले भने ठाकुरको हस्ताक्षरले वैधानिकता पाउनुपर्ने बताए । जसपाको संसदीय दलमा ठाकुर र यादव पक्षको बराबर संख्या छ भने कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । पूर्वराजपाका ३ जना कार्यकारिणी समितिका सदस्य महेन्द्र यादव, गजाधार यादव र रमेश यादवले कित्ता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा पुगको छन् । यद्यपि, ठाकुर पक्षका नेताहरूले पनि यादव पक्षका केही नेताहरू आफूतिर आएको दाबी गरेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।